के तपाईलाई थाहा छ कपुरको मह्त्व कती छ ? कपुरले दिन्छ यस्ता फाईदा « Niatra TV
के तपाईलाई थाहा छ कपुरको मह्त्व कती छ ? कपुरले दिन्छ यस्ता फाईदा
काठमाण्डौं । कपुर हामीले पूजापाठ र आरती बाल्दा मात्र प्रयोगमा ल्याउने गर्छौँ । तर कपुरको बिशेषता पूजा पाठमा मात्र सिमित छैन । कपुर मानव स्वास्थयको लागि पनि निक्कै फाइदाजनक र लाभकारी मानिन्छ। यस्ता छन् कपुरका अनगिन्ति फाइदाहरु ।
जलेको ठाउँमा राहत हुन्छ । कपुर चिसो हुन्छ । त्यसैले शरीरको कुनै भाग पोलेमा कपुर लगाउन सकिन्छ । जसले पोलेको स्थानमा शीतल महशुस गरिन्छ । यसका साथै शरीरमा कपुरलाई घोलेर पोलेको ठाउँमा लगाए राहत मिल्छ । यो कपालको लागि फाइदा हुन्छ । कपुरलाई नरिवलको तेलमा मिलाएर लगाएमा कपाल झर्ने समस्याबाट मुक्ति पाइन्छ। यसका साथै कपालमा ड्यान्ड्रफ आउँदैन । त्यसैले कपुर कपालको लागि धेरै लाभकारी मानिन्छ ।
कपुरले एलर्जीबाट पनि जोगाउँछ । जाडोमा हाम्रो छाला सुुख्खा भएर फुट्ने गर्छ । यसले छालामा एलर्जी आउने र छाला बिग्रिने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा कपुरलाई नरिवलको तेलमा मिसाएर लगाएमा छालालाई एलर्जी हुनबाट बचाउँछ । साथै छालामा पनि चमक ल्‍याउँछ । कपुरले अनुहारमा चमक ल्‍याउँछ । कसैको अनुहारको चमक हराएको छ भने प्रत्येक दिन सुत्नु अगाडि कपुरको पाउडर काँचो दूधमा मिलाएर लगाएमा अनुहारमा चमक आउँछ ।
यस्ले शरीरको दुखाईलाई कम गर्छ । यदि कसैलाई ढाड वा शरीर भारी भएर दुखेमा वा मांशपेशी खुम्चिएर अल्छीपना आएमा कपुरलाई तेलमा मिलाएर मालिस गर्नुपर्छ । जसबाट शरिरमा आराम हुन्छ । पेट दुख्दा पनि कपुरले काम गर्छ । कोहि पनि व्यक्ति अचानक पेट दुखेर हैरान छ भने कपुरले आराम दिलाउँछ । एक गिलास पानीमा कपुुर हालेर पिएमा पेटलाई आराम दिलाउँछ ।